Ukuloba iintlanzi kwi-aquarium: iintlobo kunye neendlela | Ngeentlanzi
Xa sinentlanzi kwi-aquarium, ukuba sidibanisa iisampulu zohlobo olunye lwendoda nolwesetyhini, kungekudala okanye kamva baya kuphelisa ukudibana. Ngokuchasene noko kwenzekayo ngeentlanzi ezihlala kwindalo yazo, ukukhula kunye nokuzala kuxhomekeke kuhlobo lweentlanzi kunye nendlela oyilungiselele ngayo i-aquarium. Zininzi iindlela zokwenza ukulingana kweentlanzi kwi-aquarium.
Kweli nqaku siza kukuxelela ukuba zeziphi iindlela ezahlukeneyo zokuloba iintlanzi kwi-aquarium kunye neempawu zazo eziphambili.
1 Iindidi zokulingana kweentlanzi kwi-aquarium
2 Iindlela zokukhwela iintlanzi kwi-aquarium
2.1 Ukufakwa kweqanda
2.2 Ukudala indlwane
2.3 Ukufakelwa komlomo
2.4 Ukwanda kwezinto
Iindidi zokulingana kweentlanzi kwi-aquarium
Umahluko ekuzalisweni kweentlanzi kukuba ingaba ukuchumisa kwenzeka ngaphakathi okanye ngaphandle komzimba wabasetyhini. Oku kuya kuxhomekeka kuhlobo lokuzaliswa kwentlanzi nganye. Sifumana iintlanzi ezi-oviparous, ezinye zine-viviparous kwaye ezinye zine-ovoviviparous. Siphinde safumana uhlobo oluthile lwentlanzi. Siza kuhlalutya iintlobo ezahlukeneyo zokuvelisa ezikhoyo:
Intlanzi ye-Oviparous: imalunga neentlanzi ezininzi ezikhoyo. Luhlobo lokuphinda uvelise kunye nokuchumisa kwangaphandle apho owasetyhini abeka khona amaqanda kwaye achunyiswe yindoda esasaza isidoda emanzini. Amaqanda anokufakwa emazantsi olwandle, anamathele ematyeni, okanye adadane elwandle. Ukuba sinentlanzi kwi-aquarium, baya kusebenzisa izinto zokuhombisa ukuze babeke amaqanda. Ukuba ibhinqa kulo naluphi na uhlobo lwengozi, iya kukhusela amaqanda ngomzimba wayo. Ngokwesiqhelo iintlanzi ezizalela amaqanda ziye zibengingqi ukukhusela inzala yazo.
Intlanzi eViviparous: Kukho ezinye zeentlanzi ezi-viviparous ezinokuchumisa ngaphakathi ngokufanayo nezilwanyana ezanyisayo. Kule meko, iinkunzi zichumisa umntu wasetyhini ngaphakathi. Nje ukuba kwenziwe i-fry, imazi izala amantshontsho ayo.
Intlanzi ye-Ovoviviparous: luhlobo olunomdla lokuvelisa kwakhona. Kwaye ke kukuxuba izilwanyana ezi-oviparous kunye nezilwanyana ezi-viviparous. Kule meko sifumana uhlobo lokuvelisa kunye nokuchumisa kwangaphakathi. Emva kokudibana, owasetyhini ubeka iimpondo ezihlala ngaphakathi komzimba wakhe. Endaweni yokubagxotha kuhlobo oluthile lwamatye okanye nzulu emhlabeni, bazishiya ngasemva nangasemva zikhulile. Xa amaqanda eqandusele, amantshontsho aqandusele sele sele ekhulile aphuma.
Intlanzi yeHermaphroditic: Ezi ntlanzi zinamalungu okuzala angamadoda nabasetyhini. Ukufikelela ekuvuthweni ngokwesini kunokuba yindoda okanye ibhinqa. Ezinye izilwanyana ze-hermaphroditic zingatshintsha isini sazo kwada kwaphindeka izihlandlo ezininzi ngemini. Eyona nto ixhaphakileyo kwezi ntlanzi kukuba zilandelelwano lwe-hermaphroditism. Kuthetha ukuba isini sitshintshwa amaxesha ambalwa kuphuhliso lwaso.
Iindlela zokukhwela iintlanzi kwi-aquarium
Enye yeendlela iintlanzi ekufuneka zidibane ngayo kwi-aquarium kukubeka amaqanda. Iintlanzi zabasetyhini zibeka amaqanda azo emazantsi e-aquarium okanye kumagqabi esityalo esithile emva koko eyindoda ize ifike ichumise. Zombini inkunzi nemazi zisebenza ngababini ukukhusela amaqanda ngazo zonke iindleko. Nokuba sele bekhulile bayaqhubeka nokubakhusela de babe nako ukuziphilela bodwa.
Uhlobo lwe-carp luqabane ngendlela efanayo kwaye lunokubeka amawaka amaqanda. Nangona umahluko kuphela kukuba bayakwazi ukutya amaqanda kwaye nabancinci xa sele beqandusile.
Inye into ekufuneka uyithathele ingqalelo ukuba iintlanzi zethu zinendlela yokuzala ngokubeka amaqanda yinyani yokufudukela kwimazi okanye kwi-aquarium eyahlukileyo. Olu hlobo lwe-aquarium lubizwa ngokuba yi-farrowing kwaye lwenziwa ngenjongo yokusahlula umntu wasetyhini kwabanye ukuze abeke amaqanda kwaye anakekele abancinci ngaphandle koloyiko okanye indlela yokuziphatha komhlaba. Kwaye, Kuxhomekeka kuhlobo lweentlanzi esinazo kwi-aquarium, Kufuneka sazi ukuba uninzi lwazo ngamarhamncwa amancinci okanye amaqanda. Ukuthintela ezi meko, kungcono ukuba wazi ukuba umntu obhinqileyo ukhulelwe kwaye umshenxisile kwi-aquarium ngokubanzi ukuze ayibeke enye kwenye.
Enye inkqubo ihamba ngezidleke. Le ndlela ibandakanya owasetyhini ohambisa amatye emazantsi e-aquarium ukwenza indlwane okanye ukuvuthela amaqamza kwiindawo esele zenziwe apho angabeka khona amaqanda. Okulandelayo inkunzi iyeza ize ichumise indlwane, iyikhusele engozini de amaqanda aqandusele.
Olu hlobo lokudibana kweentlanzi kwi-aquarium ukuba zenzeke Kuyimfuneko ukuba itanki yentlanzi inezinto zokuhombisa ezisebenza njengamatye okanye indawo ethile yokukhusela. Kufuneka kukhunjulwe ukuba intlanzi kufuneka izive ikhuselekile kwaye ikhuselekile ekumelaneni.
Enye indlela yokutshatisa kukufukama ngomlomo, okubandakanya owasetyhini obekela amaqanda akhe ezantsi kwe-aquarium. Indoda iza ngokulandelayo ize ichumise amaqanda, emva koko inkazana iyawaqokelela amaqanda ize iwafukamele emlonyeni wayo ade aqandusele.
Olu hlobo lokuvelisa luqhelekile kwaye kufuneka ulumke kuninzi lwee iintlobo zeentlanzi ezizingelayo zamaqanda ezinye iintlobo. Xa simisela ukuba loluphi uhlobo lwentlanzi esiza kuyazisa kwi-aquarium, yonke lemiba kufuneka ithathelwe ingqalelo.
Banendlela ovoviviparity. Umzekelo woku ziintlobo ezaziwa ngokuba ziiguppies. Kolu hlobo lwendoda lisebenzisa i-anal fin yayo ukugqithisela isidoda sayo emfazini. Oku kuchumisa amaqanda e-guppy yabasetyhini eya kuthi inike ubomi kwiminnows yakhe. Kolu hlobo lokuvelisa kwakhona, umntu obhinqileyo angagcina ezinye zesidoda sendoda, kwixa elizayo, iya kuphinda ivelise kwakhona ngaphandle kobukho bayo.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi unokufunda ngakumbi ngeendlela ezahlukeneyo zokuloba kweentlanzi kwi-aquarium.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Ukulingana kweentlanzi kwi-aquarium